ZIMBABWE YANHASI (in Shona) (30-11-06) - The Zimbabwean
ZIMBABWE YANHASI (in Shona) (30-11-06)
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama nekutya uye kusaziva kuti ramangwana rakamira sei. Vanhu vanosangana nerusarura rwakasiyana-siyana uye havagoni kuwana raramo. Kutambudzika kuri kuramba kuchiwanda, mabasa arikushaikwa, zvikamu zvingangoita makumi masere nemaviri zvevanhu vemuZimbabwe hazvina mab
asa uye mitengo yezvinhu zvinodiwa pakurarama irikungoramba ichikwira. Mabasa anofanirwa kunge achiitwa munzvimbo dzigere vanhu sekutakurwa kwemarara haasi kuitwa. Dzidzo, dzimba nezvimwe zvakanyanya kukosha muraramo yevanhu hazvisi kuwanikwa zvavakugonekwa nevapfumi. Mukondombera uyu wakonzera kusiiwa kwenherera nekutungamirirwa kwedzimba nepwere, idambudziko guru ratakatarisana naro uye ririkuwedzerwa nekushaikwa kwemishonga nekudzikira kwezveutano. Vashandi vazhinji vaneunyanzvi vari kuenda kunze kwenyika. Vanhu varikutadza kukotsorora nekutwasanudza mashandiro ehurumende yavo nekuda kwemitemo yeudzvanyiriri inovanyima rusununguko uye inonyararidza vatori venhau. Huori hwadzika midzi mumapazi nezvinhanho zvese zvehurumende uye upenyu hwemunyika yedu hwangova nyore kunevatsigiri vebato rinotonga.
CHINANGWA CHEDU NDECHEI:
Madzimai nevarume veWOZA vakaparura kuratidzira zvinerunyararo. Chinangwa chedu ndechekuunganidza zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvinoda gutsaruzhinji kubva kuvatungamiri. Nguva yekuti tironge ramangwana redu tichisiya zveshure yakwana. Tinoda utongi huri pachena pasina kubiridzira nekusatendeka kubva kuvatungamiri vedu, vatungamiri vanogona kugutsaruzhinji uye tinoda bumbiro remitemo rakanyorwa nevanhu.
WOZA ICHITSVAKA MIFUNGO YEGUTSARUZHINJI NEGADZIRISO YEUIPI HWAKAITIKA MUZIMBABWE
Kutanga munaJanuary 2006, Woza yangaichifamba nyika yose ichitora zvishuwo zvevanhu, zvishuwo zveZimbabwe itsva yavanoshuvira kurarama mairi. Pamisangano mazana maviri anemakumi masere nemina yatakaita, gumi rezvuuru zvevanhu rakagona kutiudza zvavanoda muZimbabwe itsva. Takanyora pasi zvavakataura mugwaro rino regwara regutsaruzhinji.
Pazasi pakanyorwa gwara regutsaruzhinji. Tinoda kuziva zvamunofunga pamusoro paro. Tinokukumbirai kuti muriverenge nemhuri, shamwari nemunharaunda dzamugere mugotizivisa kana muchibvumirana naro. Kana muchibvumirana nezvakanyorwa mariri, sainai zita renyu kuratidza rutsigiro rwenyu uye kuzadzikisa kwaringagona kuita zvishuvo zvenyu.
Gwaro regwara regutsaruzhinji iri rakanyorerwa vanhu, nevanhu
Huye vanhu vanofanira kurirwira. Tikabatana tinogona kushandura zvishuwo izvi kuti zviitike
Tiudzei zvamunofunga negwaro regwara regutsaruzhinji nekutinyorera ku WOZA/MOZA, P.O. Box FM 701, Famona, Bulawayo kana kutitumira email pakero inoti [email protected]
ZVIROTO ZVE ZIMBABWE ITSVA
GWARO RINORATIDZA GWARA REGUTSARUZHINJI
Nyika ichatongwa zviripamutemo uye munhuwese achava pasi pamutemo, munhuwese achatongwa zvakaenzana pasi pemutemo, pasina rusarura uye zvisinei kuti ndewebato ripi rezvematongerwe enyika.
Pachava nekuremekedza kodzero dzevanhu dzekuva nepfuma
Hari dzakabviswa kunzvimbo inoyera yeNjelele kuMatobo Matabeleland, dzinofanirwa kudzoserwa, kushaiwa ruremekedzo kwakaitwa pakudzibvisa kogadziriswa uyekwokumbirwa ruregero.
VESE VANODA ZIMBABWE NGATIBATANEI PAKUSHANDURA ZVIROTO ZVEGWARA REGUTSARUZHINJI NEGADZIRISO YEIUPI HWAKAITIKA MUZIMBABWE KUTI ZVIGOVAPO PACHOKWADI